Minisitra Lalatiana A. : “Tsy manao jadona isika” | NewsMada
Minisitra Lalatiana A. : “Tsy manao jadona isika”
“Nanapa-kevitra hiroso amin’ny fifidianana loholona ny fitondram-panjakana. Satria izay no voalazan’ny lalàna, fa tsy hoe manao didy jadona hanao fifidianana loholona ny fitondrana. Tapitra amin’ny 2 febroary 2021 ny fe-potoam-piasan’ny loholona, ankehitriny. Zava-misy izay fa tsy hoe foronin’ny fitondram-panjakana”, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Tsy maintsy atomboka dieny izao ny dingana fanatanterahana ny fifidianana fa tsy hoe tapitra ny fe-potoam-piasan’ireo loholona fa vao hojerena izany. Rehefa tonga ny 2 febroary 2021, efa tokony hanana loholona vaovao i Madagasikara.
Ho toy ny tamin’ny 2015 ny fifidianana
Amin’ny 11 desambra ny fifidianana loholona. Adihevitra ny hoe tsy feno ny mpifidy vaventy fa tsy mbola natao ny fifidianam-paritra, araka ny lalàna. Toy izany koa ny amin’ny olom-boafidy eo anivon’ny faritany. “Tsy nisy anefa izany tamin’ny fifidianana loholona tamin’ny 2015, fa natao ihany ny fifidianana loholona”, hoy izy.
Eo koa ny tsy fahafenoan’ny mpifidy vaventy toy ny ben’ny Tanàna, mbola manao fangatahana fandravana didy eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Ny didim-panjakana noraisin’ny filankevitry ny minisitra: iray volana mialoha ny fifidianana, ny 11 novambra, vao mikatona ny lisitry ny mpifidy amin’io fifidianana io.
Raha amin’izao no misy ben’ny Tanàna manao fangatahana eny anivon’ny Filankevi-panjakana, efa milamina izany amin’ny 11 novambra.